Global Voices teny Malagasy » Ezypta: Rama Yade · Global Voices teny Malagasy » Print
Voadika ny 27 Desambra 2007 9:35 GMT 1	 · Mpanoratra Tarek Amr Nandika Andriamifidisoa Zo
Sokajy: Ejipta, Frantsa, Senegal, Foko sy Fiaviana, Politika, Vonjy Voina
Tsy amin'ny maha Rama Yade  – sekreteram-panjakana frantsay misahana ny raharaham-bahiny sy ny zon'olombelona – azy ka amin'ny fijery politika no itondran'ny mpamaham-bolongana Ezyptiana Eastern Bird  ity lahatsoratra manaraka ity  (Ar). Raha ny marina dia lohahevitra hafa mihitsy no nanaitra ny aingam-panahiny ka nahatonga azy hanoratra io lahatsoratra eo ambany io.
Toy izao ny sorany:
Teto ampiseraserana aho no nahita kisendrasendra ity sarin'ny minisitra frantsay misahana ny raharaham-bahiny sy ny zon'olombelona ity, dia Rtoa Rama Yade izany.
Tsy hijery ny lafiny politika aho, indrindra ny fanoherako ny politikan'ny Lafrantsan'i Sarkozy  na zavatra mifandraindraika amin'izany, fa hifantoka manokana amin'ny hatsara-tarehin'ity minisitra vehivavy ity.
Teo no nahatsapako ny fahamarinan'ny zavatra tsy tandrintsika matetika.
Tsy mifidy tava, na foko na loko ny hatsaran-tarehy ny zareo a!
Indrisy moa fa ferantsika amin'ny fijery manavakavaka matetika izany hoe hatsaran-tarehy izany ka tondroina fa ny manana volo blaondy sy manga na maitso maso ihany no izy.
Ny mety ho anton'izany angamba dia noho ny firaikiraikentsika hatrany amin'izay avy any ami'ny tany tandrefana, ary ny fiheverana fa ambany avokoa izay rehetra ho avy amin'ny mainty hoditra.
Saingy tsy noho ny fahita azy ivelany ihany no mahameva andRama Yade fa noho ny fihoarany ny sakana rehetra noho ny fanavakavahana amin'ny mahavehivavy mainty hoditra azy ka nahatonga azy ho amin'izao toerana misy azy izao.
Miarahaba anao sy mirary soa anao ry minisitra tsara tarehy sy izay tsara tarehy hafa rehetra tahaka anao manerantany.
URL to article: https://mg.globalvoices.org/2007/12/27/354/
 Rama Yade: http://en.wikipedia.org/wiki/Rama_Yade
 Eastern Bird: http://asfoorelsharq.blogspot.com/
 lahatsoratra manaraka ity: http://asfoorelsharq.blogspot.com/2007/12/blog-post_23.html
 Tarek Amr: https://www.globalvoicesonline.org/author/tarek-amr/